BOOTABLE FLASH DRIVE ကို ACRONIS TRUE IMAGE တို့နှင့် DISK ကိုဒါရိုက်တာ - အစီအစဉ်များ - 2019
တကယ်တော့တစ်ဦး bootable USB drive က Acronis True Image တို့ကိုထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး, disk ညွှန်ကြားရေးမှူး (အတူတူပင် drive ကိုနှင့်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်နှစ်ဦးစလုံးအစီအစဉ်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်နှစ်ဦးစလုံး, နိုင်ပါတယ်), လိုအပျသမြှသောကြောင့်ထုတ်ကုန်သူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။
ဒီဥပမာ True Image တို့ 2014 ခုနှစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုမှတျတမျးတငျထားမည်ဖြစ်ပြီး Disk ကိုဒါရိုက်တာ 11. ကြည့်ရှုကိုလည်း bootable USB drive ကဖန်တီးရန်အစီအစဉ်ကို :. သော (စကားမစပ်, ထိုနည်းတူသင်က ISO ဖန်တီး, ပြီးတော့ disc ကိုမှမီးရှို့နိုငျသညျ) တစ်ဦး bootable USB flash drive ကို Acronis အောင်ဘယ်လိုပြပါလိမ့်မယ်
Acronis Bootable Drive ကိုအသုံးပြုခြင်း
Acronis ထုတ်ကုန်များအားလုံးမကြာသေးမီဗားရှင်းသင်တစ်ဦး bootable USB မှတ်စေ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး bootable က ISO ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုတော်မူသောရရှိနိုင် Bootable drive ကို။ သငျသညျမျိုးစုံ Acronis အစီအစဉ်များရှိပါကကျနော် (လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲဖြင့်ဖြစ်စေ) အသစ်များကိုအတွက်ဖျော်ဖြေအားလုံးလုပ်ရပ်များအကြံပြု: ဖြစ်ကောင်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုပေမယ့် drive ကနေ boot တက်သည့်အခါပြောင်းပြန်ချဉ်းကပ်မှု၌ငါအချို့သောပြဿနာများရှိခြင်းဖြစ်၏။
"Bootable Drive ကို" - အဆိုပါ Acronis Disk ကိုဒါရိုက်တာတစ်ဦး bootable USB drive ကိုဖန်တီးရန် wizard ကိုစတင်ရန်ရန်, menu ကနေ "Tools" ကိုရွေးချယ်ပါ။
အဆိုပါ True Image တို့ 2014 ခုနှစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်နှစ်ခုအရပ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်: ကို "Backup ကိုနှင့် Restore" နှင့် "Tools များနှင့်အသုံးအဆောင်များ" ၌။
နောက်ထပ်လုပ်ရပ်တွေကိုသင်တဦးတည်းအရာအဘို့ မှလွဲ. ဒီ tool ကို run သောအရာကိုအစီအစဉ်ကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စနီးပါးတူညီနေသောခေါင်းစဉ်:
သငျသညျ Acronis Disk ကိုဒါရိုက်တာမှ 11 တစ် bootable flash drive ကိုဖန်တီးတဲ့အခါသင်က၎င်း၏ type ကိုရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည် - က Linux ကိုသို့မဟုတ် Windows PE အပေါ်အခြေခံသည်ရှိမရှိ။
အဆိုပါ True Image တို့ 2014 ခုနှစ်ကဒီရွေးချယ်မှုကိုမရရှိနိုင်, သင်အနာဂတ်မှာတစ် bootable USB drive က၏အစိတ်အပိုင်းများရွေးချယ်မှုတိုက်ရိုက်ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။
သငျသညျမျိုးစုံ Acronis software ကိုရှိပါက, သင်က backup တစ်ခု True Image တို့၏မိတ္တူ, hard drive ကိုအတူလုပ်ကိုင်ဘို့ tools များအဖြစ်ပြန်လည်နာလန်ထူထံမှတဦးတည်းပြန်လည်နာလန်ထူအေးဂျင့်သိုလှောင်ရေးကိရိယာထားရန်ဖြစ်နိုင်ဒီတော့တစ် flash drive ကိုအပေါ်မှတ်တမ်းတင်ထားသင့်တယ်သောသူတို့အဘို့အသီးအသီး၏အစိတ်အပိုင်းများကိုရွေးနိုင်သည် partition ကို Disk ကိုဒါရိုက်တာနှင့်မျိုးစုံ Operating System နဲ့အလုပ်လုပ်ဘို့, လိုအပ်ပါက, tools များ - Acronis OS ကိုရွေး။
နောက်တစ်နေ့ဇာတ်စင် - သင်အနာဂတ် Acronis Boot တက် Disk ထဲတွင်မှတ်တမ်းတင်ချင်တယ်ဆိုရင်, (ထို flash drive ကိုလျှင်, FAT32 အတွက် pre-ချပ်မှနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်) မှတ်တမ်းတင်, သို့မဟုတ် ISO ဖန်တီးချင်ရှိရာ drive ကိုရှေးခယျြဖို့။
ထို့နောက်သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက် (တန်းစီ၏အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုတစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်) ကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၏အဆုံးအဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
flash drive ကိုသို့မဟုတ် Acronis ကနေ Boot တက်မီနူး
ပြီးစီးအပေါ်သို့သင်, သင့်ကွန်ပျူတာကို start up hard disk ကို partitions ကိုစနစ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ဆောင်ပါ backup တစ်ခုကနေသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို restore သို့မဟုတ်တစ်စက္ကန့် operating system ကို install ပြုလုပ်ပြင်ဆင်ထားရန်နိုငျသောအနေဖြင့်ရွေးချယ်ထားသည့်ထုတ်ကုန် Acronis နဲ့အဆင်သင့်လုပ် bootable USB flash drive ကို, get ။
ဗီဒီယို Watch: MakingaBOOTABLE USB In Windows UUI (နိုဝင်ဘာလ 2019).